Ajụjụ - Gaomi Mingda Machinery Co., Ltd.
Gịnị bụ isi ngwaahịa anyị factory?
1. Nzuzo Rolling gburugburu agụba
2. Nhata ọkpụrụkpụ otu helical agụba
3. enweghị aro helical pupụtara
4. akpụzi eme gburugburu agụba na obere mụụrụ ya.
All ngwaahịa nwere ike ịbụ omenala mere
ihe bụ size anyị na ngwaahịa?
Gịnị bụ anyị ike?
Nọmalị, anyị factory nwere ike 500 tọn kwa ọnwa.
Olee ụdị mmepụta akụrụngwa anyị factory nwere?
Anyị factory ka agụba oyi Rolling na nkume igwe nri, na-aga n'ihu igwe anaghị agba nchara oyi Rolling na nkume igwe nri, hà ọkpụrụkpụ otu-mgbawa na ịkpụzi igwe, n'ichepụta na-aga n'ihu oyi Rolling na nkume igwe nri akụrụngwa mmepụta akara.
Gịnị bụ zuru igwe mepụtara anyị factory?
Anyị factory nwere ike niile bụ ngwá ọrụ nke ntụgharị, igwekota na na.
Ndi anyị factory naanị emepụta ofu ụdị na nkọwapụta ngwaahịa?
Anyị factory nwere ike niile na ngwaahịa ndị metụtara anyị ụlọ ọrụ, na-anabata ahaziri ịghasa agụba na ngwá na ịghasa agụba.